ပို့ အသစ်များ အပိုင်း (၁)
Moral Fairground’s Interview with Mitos Urgel for World Fair Trade Day - On May 5th, in honor of World Fair Trade Day, Mitos Urgel participated in an interview on encouraging governments, communities and the world to rebuild the...
အမှိုကျမြားရဲ့အန်တရာယျ - ရနျကုနျမွို့တှငျးတဈနရောရှိ ရဆေိုးမွောငျးအတှငျးမှ အမှိုကျမြား။ ကဲ ၊ အမှိုကျကောကျကွရအောငျ။
- နှစ်ဟောင်းက အညစ်အကြေးတွေ အကုန်စွန့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ အကုန်လွှတ် Rest of your post
တော်လှန်သင့်ရင် တော်လှန်ပါ - ---------- Forwarded message တစ်ခုရတယ် စိတ်ဝင်စားတာနဲ့ ပြန်တင်ပေးလိုက်တာ---------- တော်လှန်သင့်ရင် တော်လှန်ပါ ဦးဇင်း တစ်ပါးအနေနဲ့ မရေးသင့်ဘူး...။ ဒါပေမယ်...
B Y A K G A's online
အတွေးသစ် - ဘင်
- အခုတလော ဘာမှရေးချင်စိတ်မရှိလို့ မရေးဖြစ်တာကြာပေါ့၊ သူများတွေရေးတာတွေပဲ လိုက်ဖတ်နေမိတယ်။ တခါတလေလဲရေးချင်စိတ်လေးတော့ဖြစ်မိသား တကယ်တန်း ရေးမယ်လုပ်တော့ စကားလုံ...
Spirit Media Production
သီးလေးသီး နှင့် ဆေးရောင်စုံ အငြိမ့် ဘန်ကောက်မြို့အနီး အုန်းနွဲ့ အရပ်တွင် ကပြဖျော်ဖြေမည် - သီးလေးသီး နှင့် ဆေးရောင်စုံ အငြိမ့် ဘန်ကောက်မြို့အနီး အုန်းနွဲ့ အရပ်တွင် ဖေဖော်ဝါရီလ ၃ ရက် ၂၀၀၈၊ တနင်္ဂနွေနေ့တွင် တင်ဆက်ကပြဖျော်ဖြေမည့် ပွဲ ပိုစတာ
CHITSANM'S LUXURY MUSIC
Art is my life .......
DREAM Blog မှကြိုဆိုပါတယ်ရှင်
ĦaN .....ŦhIt ..... ИψΣim
ကျွန်မ နှင့် တွေ့သမျှ ၊ မြင်သမျှ ၊ ခံစားလို့ ရသမျှ
တစ်ချက်ပြုံးရင် တစ်ရက် အသက်ပိုရှည်ပါတယ်
ပို့ အသစ် (၃)
Animation videos for your brand - Hi , My name is Paul, and I'maprofessional producer specializing in cool animated commercials. I currently have more than 250 ads under my belt. I am...
I am Here again. :) - Dear all.... How have you been? Hope you are havingablessed year.
Tutorial Screenshort Pada Komputer atau Laptop - Walau computer telah lama di mengetahui, namun masih tetap berlimpah yang belum umum langkah memakai screenshot alias capture display di piranti PC. Di baw...
supersmile reviews - Would you be interested in usingaquality product toothpaste fromapopular and registered American company? then i will show you some reviews about some ...
Driver Finder_v3.2.0.0 [x32 x64] ( + Crack ) - DriverFinder is an advanced driver scanning, updating and downloading utility for Windows-based PCs. မိမိကွန်ပျူတာရဲ့ လိုအပ်နေတဲ့ Driver တွေကို ရှ...
ဦးမျိူးသူရရဲ့နေ့စဉ်သုံးအင်တာနက်စာအုပ်(အင်တာနက်စတင်အသုံးပြုသူများအတွက်) - ကျွန်တော်တို့တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတော်တော်များများမှာဆိုရင်အင်တာနက်ဆိုတာ ခလေးကအစအသုံးပြုနေပါပြီ။ အိမ်၁အိမ်မှာကွန်ပျူတာဝယ်ပြီးဆိုကတည်းက အင်တာနက်ကိုတက်စင်အသုံြး...
ကျွန်ုပ်တို့ သည်..ကျွန်ုပ်တို့ သည်.....တဲ့ - ၀ရမ်းပြေးတစ်ယောက် အပျင်းထူပြီး ဆားချက်လိုက်ပါသည်။ ဒီနေရာလေး ကပါ။ ကြေငြာ...... မကြာခင် ဒေါ်လာ ၆၃ သန်းနဲ့ ဝရမ်းပြေးများအကြောင်း တင်ဆက်ဖို့ ရှိပါတယ်။ အားလုံးကျ...
Request!!!! - ကျွန်တော့်ရဲ့ Blog အား http://blackdream21.blogspot.com ဖြင့် Link ချိတ်ပေးထားသူများ ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ www.blackdream21.com သို့ ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ကာ ချိတ်ေ...
Myhome16.com အား ရပ်နားခြင်း -
ဘရောဇ်ာမှာ မြန်မာ ယူနီကုဒ့် လွယ်လွယ်ကူကူ ပေါ်ဖို့ - ကဲ ဒီတခါတော့ ပြောပြချင်တာက တော့ မြန်မာ ယူနီကုဒ့် တွေ ကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ပေါ်အောင် ဘယ်လို အလွယ်ဆုံး လုပ်မလဲ ဆိုတာပါ။ လောလောဆယ် မှာတော့ မြန်မာ ယူနီကုဒ့်...
နေရာ - သူငယ်ချင်းများ အားလုံး ပျော်ရွှင်စွာဆုံစည်းနိုင်ပါစေ
ပို့ အသစ် (၄)
တောင်သူလယ်သမားနေ့ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက် - Statement on Peasant Day in Burma by FBF
ပို့ အသစ်များ အပိုင်း (၂)
- ပြည်သူတွေ သတိရှိကြပါ လုပ်ကြံဖန်တီး ဆန္ဒပြပွဲများနဲ့ ရိုက်နှက်ပစ်ခတ်မှုအထိရှိလာနိုင်ပီး လူသေတဲ့အထိ ဖန်တီးပါလိမ့်မယ် ဒါမှလဲနိုင်ငံတကာကို ပြည်တွင်း ဆူပူမှုဖြစ်...
အကြံဉာဏ်လေး ပေးနိုင်မလား - *အကြံဉာဏ်လေး ပေးနိုင်မလား* January 28, 2016 Thursday By မင်းစိုးစံ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ကြပါစေ။ ကျောင်းတကျောင်းရဲ့ ကျောင်းသားလေးတွေက ဆို,က,ရေး,တီး နဲ့ပတ်သက်ြ...
မြတ်ဗုဒ္ဓ ကို ကြည်ညိုခြင်း (Reverence for Buddha)
ကျေးဇူးတော်ရှင် မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ၏ ဓာတ်တော်များ - အခုတခေါက် မြန်မာနိုင်ငံ အလည်ပြန်တော့..ကံကောင်းစွာနဲ့ ကျေးဇူးတော်ရှင် မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဓာတ်တော်တွေ ဖူးခဲ့ရပါတယ်။ အောင်ဆန်းဆရာတော်ဘုရားရဲ့ အောင်ဆန်း...
နေရာတိုင်းမှာ ဥပေက္ခာ - မေတ္တာနဲ့ ကိုယ်ကောင်းကျိုးရစေချင်တိုင်းလည်း သူရတာမှ မဟုတ်၊ သူ့ကံရှိမှ သူရတာ၊ ကရုဏာနဲ့ ကိုယ်ဆင်းရဲ လွတ်စေချင်းတိုင်းလည်း သူလွတ်တာမှ မဟုတ်၊ သူ့ကံရှိမှ သူလွတ်တာ၊...
၂-နှစ်ပြည့်အမှတ်တရ - သုံးမိုးမက ကျော်လွန်သွား.. လတ်ဆတ်ဆဲ ဒဏ်ရာများ...
တရားစွမ်းရည်စစ် ပြိုင်ပွဲဆိုဘဲ..... -
ရေဗက္က၀င်းရဲ့ အိန်ဂျယ် -
အတူဝိုင်းဆုတောင်းရအောင် - အ၀ါရောင်ဖဲကြိုးလေးကို ကိုင်ပြီး ကပ်ကြေးနဲ့တိခနဲ့ညှပ်ချလိုက်အပြီးမှာတော့ အတွေးတစက ပြီးခဲ့တဲ့ အတိတ်တွေဆီကို တရွေ့ရွေ့…. ဆယ်စုနှစ်တခုကျော်လောက် အထိန်းသိမ်းခံ...
~~ခံစားချက်များဆုံဆည်းရာ ~~ ကြယ်စင်လေး
Hteink Min.com My Imagination
သင်တို့၏ စာတစ်ကြောင်းသည် အားဆေးတစ်ခွက် ဖြစ်ပေသည်
ဆက်သွယ်ရန်- ဂျီတော့: chitthulay25@gmail.com
ဤ (Myannar Blog New Post) ဘလော့ဂ်တွင် ဖော်ပြထားသော ဘလော့ဂ်ပိုင်ရှင်များအား တစ်ဦးချင်းစီ ခွင့်မတောင်းနိုင်ခြင်းအပေါ် နားလည်ပေးနိုင်လိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်
ပို့ အသစ်များ © Layout By Hugo Meira.